Madaxweyne Farmaajo: Waa in la helaa siyaasad wax ku ool ah oo lagu horumarinayo qaxootiga Afrika - Halbeeg News
Madaxda ka qeyb galeysa shir madaxeedka midowga Afrika Addis Ababa, 10-2-2019
ADDIS ABABA(HALBEEG)- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlayay shir madaxeedka ururka Midowga Afrika ee maanta ka furmay Addis Ababa ayaa ka hadlay baahida loo qabo in si dhab ah loo hirgaliyo siyaasad iyo qorshayaal lagu hormarinayo qaxootiga qaaradda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in ay habboontahay in si buuxda loo xoojiyo siyaasadahaas “Marka aan had iyo jeer xal u raadinayno dadka ka hayaamaya Afrika waxaa habboon inaan difaacno oo aan ilaalinno siyaasadda iyo sharciyada lagu hormarinayo qaxootiga,” ayuu yiri madaxweynuhu.
Madaxweynuhu waxaa kale oo uu ku baaqay in la qaado tallaabooyin lagu hagaajinayo sidii ay dadka qaxootiga ahi ugu kala gooshi lahaayeen halka ay doonaay iyaga oo aan la kulmin wax jujuub ah, in ay dhul helaan iyo in ay helaan shaqo, waxbarasho, caafimaad iyo waliba aqoonsiyo magan galyo oo u suura galinaya in ay naftooda horumariyaan.
Madaxweyne Farmaajo waxa uu carrabka ku adkeeyay in dowladdiisa ay ka go’antahay hirgelinta hannaanka loo maamulayo daboolidda baahiyaha ay qabaan dadka nugul, qaxootiga, iyo kuwa kale ee ku barakacay gudaha dalka.
“Qorshaha aannu u dajinnay horumarinta dalka waxa uu si gaar ah u abbaarayaa ka jawaabidda baahiyaha bulshada inteeda jilicsan sida qaxootiga, barakacayaasha iyo kuwa dalka dib ugu soo laabtay”.
Madaxweynaha ayaa intaas ku daray in labadii sano ee u dambeysay ay dowladda Soomaaliya oo kaashaneysa bah wadaagteeda kala duwan ay ka shaqeysay dib u qaabeynta qorshaha qaran ee ku aaddan xal u helidda qeybahan iyada oo lala jaanqaadaayo xeerarka gobolka, qaaradda iyo kuwa caalamiga ah.
Shir looga arrinsanayay ka hortagga nafaqa-darrada oo maanta lagu soo gabagabeeyay Muqdisho